HARGEYSA WAAN IMANAYAA SANADKA, SOMALIYANA MARKA XABASHIDU KA BAXDO “Xasan Aadan Samatar” | WWW.SOMALILAND.NO
HARGEYSA WAAN IMANAYAA SANADKA, SOMALIYANA MARKA XABASHIDU KA BAXDO “Xasan Aadan Samatar”
Posted on Juunyo 28, 2008 by weriye1
Hargeysa (sl.no) 28 juni 2008 – Fanaanka Caanka ah ee Xasan Aadan Samatar, oo shalay Marti ku ahaa falanqaynta Jimcaha ee Idaacada BBC-da Laanteeda Afka Soomaaliga, ayaa sheegay inuu sannadka soo socda ku tala-jiro in uu Bandhig-faneed u soo qaado Magaalada Hargeysa.
Barnaamijkan, oo ahaa mid aad u xiiso badan, isla markaana si toos ah Xasan Aadan Samatar loogu waydiinayay khadka Teleefanka. Waxa uu sheegay in Heestii ugu horeysay ee uu qaadaa ay ahayd Heesta Sida hogosha Roobka, 1971-kii, taas oo uu kaga qayb-galay tartan suugaaneedkii la odhan jiray Heesaha hirgalay. Xasan aadan Samatar waxa uu sheegay in uu Masrixiyan hiigsan jiray, isla markaana uu ku dayan jiray Fanaanka weyn ee Maxamed Axmed Kuluc.
Xasan Aadan waxa uu ka dhawaajiyay in uu Dumarka Fanaaniinta ah ugu jeclaa in uu la heeso Fanaanada Sahra Axmed Jaamac. “UUM!! Anigu shakhsiyan waxaan aad u jeclaa in aan la heeso Fanaanada Sahra Axmed Jaamac.” Ayuu yidhi Xasan aadan isaga oo ka jawaabayay su’aashaas.
Xasan Aadan Samatar, oo si dadban Dhagayste Jabuuti uga waydiiyay waxa iska bedalay codkiisa, oo aan wakhtigan loola dhacsanayn sidii waaya-waayo, ayaa ku adkaystay in codkiisa wax ku biiray mooyaane aanay waxba ka dhicin. Isaga oo si uu taa u muujiyo ku luuqeeyay heesta tusaalaha uu dhagaystuhu ugu soo qaatay, oo ahayd Markaan dada jiray shan. Taas oo cadaysay da’a kasta ha jiree Xasan Aadan in uu weli heesi karayo.
Fanaanka Xasan Aadan, oo dhagayste ku sugan Magaaladda Garawe su’aal ka waydiiyay waxa uu u iman waayay Puntland, waxa uu ku jawaabay, “Gobolaysi maaha, Puntland waxaan u arkaa Gobol ka mid ah Gobolada Soomaalida, sidaan dalka uga soo tagay 1989-kii dalka dib uguma soo noqon. Marbaan imi Jamhuuriyada Jabuuti. Soomaaliyana waxaan imanayaa markay Xabashidu ka baxdo.” Ayuu yidhi Xasan Aadan Samatar.
Sidoo kale, mar Xasan Aadan uu dhagayste reer Hargeysa ahi waydiiyay, sababta uu u iman waayay Magaalada Hargeysa, oo ahayd Magaaladdii Fanaannimaduusu ku soo shaac-baxday, isla markaana ay ka soo jeedaan Abwaanada Sameeyay Heesaha ugu badan ee uu qaado, Sida Xasan-ganay oo kale, waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi Xasan, “Waa runtaa. Hargeysi waa Magaalo wanaagsan, waa Magaalo aan aad u jecelahay, mar aan Jabuuti imi ayay ii qorshaysneyd inaan Hargeysa imaado, may suuragelin barnaamijyo ded-deg ah ayaan dhinaca Kanada dib ugu noqday. Waanan imanayaa Hargeysa sanadka soo socda, oo barnaamij qaadhaan ururin ah, oo aanu ugu magac-daray Alla ha u naxariistee Cabdillaahi Qarshe, oo aanu qaadhaan ugu ururinayno dadka qaba Xanuunka dhimirka, ee maskaxda ku dhaca ayaanu keenaynaa. Waxaanan u soo sheegay in aan imanayo Hargeysa saaxiibkay Xasan-ganay. Markaa Hargeysa waan imanayaa, Hargeysina waa Hargeysa.”
« Maxaad ka Ogtahay Khatarta uu Internet-ku u leeyahay Caruutaada. XAFLAD BALAADHAN OO LOO SAMEEYEY WAJIGA LABAAD EE BAAHINTA SLSC-TV IYO WEEDHIHII AY KA YIDHAAHDEEN MADAXDII HALKAA KA HADASHAY »